Seranam-piaramanidina Krabi (Krabi - KBV) ~ Journey-Assist - Scoreboard an-tserasera, Famintinana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Jeografia, seranam-piaramanidina, famindrana manerana an'i Thailand » Seranam-piaramanidina Krabi (Krabi - KBV)
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Krabi (Krabi - KBV), Thailand
Topimaso amin'ny seranam-piaramanidina Krabi (Krabi - KBV)
Scheme Airport Krabi
Ny antsipirian'ny fifandraisana seranam-piaramanidina ao Krabi ary ny fomba hahazoana
Saripika sy hevitra ao amin'ny seranam-piaramanidina Krabi
Scugeboard amin'ny seranam-piaramanidina Krabi
Toerana 15 km avaratra-atsinanan'ny tanànan'i Krabi, akaikin'ny toerana mpizahatany malaza toa an'i Fr. Ko Lanta, torolàlana Ao Nang, Semenanjung Railay.
Misy sidina mivantana amin'ny seranam-piaramanidina ity avy any Moskoa avy any Transaero. Ny sata dia miasa ary mandritra ny vanim-potoana ambony.
Seranam-piaramanidina Krabi dia tohanan'ny Air Asia, Bangkok Airways, Malaysia Airlines, Thai Airways, Nok Air.
30 km miala ny seranam-piaramanidina ny valizy. Afaka mandeha any amin'ny minibus na taxi-be ianao. Ny tapakila ho an'ny minibus dia amidy amin'ny masoivoho fitsangatsanganana, ary ny mpamily fiarakaretsaka dia afaka mandamina samirery. Azo atao ihany koa ny mamaky minibus (raha misy andiany mpizahatany misy olona 6-8; ny vola dia mitentina 2 000 eo ho eo) na manofa fiara ao Avis na Budget.
Ny tetika amin'ny seranam-piaramanidina ao Krabi
Scheme Airport Krabi (rihana voalohany)
Any amin'ny tany, misy efitrano fiandrasana, toeram-pitsaboana. Ao koa ny fitakiana entana. Eny, ny fombafomba mahazatra - fifanakalozana fifanakalozana vola, varotra ny s-carte, fivarotana misy sakafo maivana, fivarotana souvenir, ary lahatsoratra fanampiana voalohany. Eo koa ny biraon'ny tapakila ho an'ny biraon'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny biraon'ny fiantsonana ary ny departemanta kely iray manana andraikitra maimaim-poana.
Seranam-piaramanidina Krabi. Tetika. Roa voalohany (v-thailand.com)
Ny rihana faha-2 eo amin'ny seranam-piaramanidina dia notazonin'ny fahatongavany. Fiara iray ho an'ny sidina an-trano ary iray ho an'ny sidina iraisam-pirenena. Hita eto ihany koa ny fahazoan-dàlana mifehy ny mpandeha sy ny serivisy fifindra-monina any Thailand.
Ny rihana fahatelo dia natokana ny fialana. Ireto ny mpanisa, ny fisavana trano. Fampahalalana momba ny zavatra. Eto, aorian'ny fisoratana anarana dia hahita efitrano fiandrasana roa ianao. Ny iray ho an'ny sidina an-trano, ny iray kosa amin'ny sidina iraisam-pirenena. Eo ambonin'io gorodona io dia misy fidirana avy any ivelany. Mazava ho azy fa tsy misy adidy. Ny halavany amin'ny habe sy ny antoka, fa amin'ny vidiny tsara.
Ny rihana fahefatra amin'ny seranam-piaramanidina dia natokana ho an'ireo faritra ho an'ny mpanjifan'ny VIP sy ny trano fisakafoanana maro. Ny ampahany lehibe amin'ny gorodona dia natokana ho an'ny tranoben'ny teknika eo amin'ny seranam-piaramanidina.
Fiara avy amin'ny seranam-piaramanidina Krabi
Avy any amin'ny seranam-piara-manidina dia afaka mankany amin'ny toerana ilainao amin'ny fiarakaretsaka ianao, amin'ny fiara fitateram-bahoaka, na mamaky boky mialoha. Kiwitaxi famoahana famindrana lisitra etsy ambany:
Fiakaran'ny saran-dalana avy any Krabi (v-thailand.com)
Ny vidin'ny bus avy any Krabi (v-thailand.com)
Ahoana ny lalana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Krabi. + vidiny
Seranam-piaramanidina Krabi eo amin'ny sarintany, fifandraisana misy anao
Address: 133 Phet Kasem Rd, Nuea Khlong, Distrika Nuea Khlong, Krabi 81130, Thailandy
telefaonina: + 66 75 701 473
Mifindra amin'ny sidina iraisam-pirenena sy an-trano ao amin'ny seranam-piaramanidina Krabi:
Hevitra ho an'ny seranam-piaramanidina Krabi (famerenana Google)
Seranam-piaramanidina isam-paritra. Kely, tsy misy dikany, fa izay rehetra ilainao dia ao. Amin'ireo mpitrandraka, ny kafe sy ny fivarotana no tsy manaja. Avy eo miasa ny exchanger, eny, tsia, ary ny tahan'ny dia tena tsy mahasoa. Fanambarana tsy misy tànana amin'ny fifangaroan'ny Anglisy sy Thai). Lehibe ny filaharana. Tsy feno sidina scoreboard. Ny zava-dehibe ihany no nisy nahatsikaritra ny fidirana.
Raha tsy izany, tsy dia ratsy avokoa ny zava-drehetra. Manampy ny mpiasa.
Fikarohana farany. izay no miampy.
Ekena ny carte banky any amin'ny fivarotana fa raha ny habe amin'ny taratasim-bola dia mihoatra ny 200 baht. Araka izany dia tamin'ny taona 2018. Mino izany aho izao
Tsy mandeha ny mari-pana rivotra. Tsy misy Wi-Fi (2018). Lalana lehibe mankany amin'ny trano fidiovana. Somary malemy ho an'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena.
Nefa omena fa tsy mipetraka eto ianao, fa mandany adiny ora maro, dia tsy misy dikany izany rehetra izany